တဖကျနဲ့ တဖကျနငျးထားတဲ့ အမွီးတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ ထိုငျဝမျ နဲ့ တရုတျကွီး.....ညိပီလေ - Pyit Time Htaung
တဖကျနဲ့ တဖကျနငျးထားတဲ့ အမွီးတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ ထိုငျဝမျ နဲ့ တရုတျကွီး…..ညိပီလေ
“ထိုငျဝ မျ သူလြှိုတှေ ရဲ့ ဝနျခံခကျြမြား” အစီအ စဉျကို တရုတျ ရုပျမွငျသွံ ကားမှာ ထုတျ လှငျ့ ( “ခွိမျးခွောကျ လာနတေဲ့ တရုတျ ရဲ့အန်တရာယျ” ဆိုပွီး ထိုငျဝမျက ကမ်ဘာကို ခတြယျ တရုတျက လညျး TV ကလှငျ့ပွီး ထိုငျဝမျ ကို အရှကျခှဲတယျ ……ညှိတော့ ညှိနကွေပွီ….)
တရုတျနို ငျငံပိုငျ ရုပျမွငျသံကွား ဌာနက ထိုငျဝမျ အတှကျ သူလြှိုလုပျသူတှရေဲ့ ဝနျခံခကျြတှေ လို့ သူတို့က ပွောနတောတှေ ပါဝငျတဲ့ အစီအစဉျတှကေို ၃ ည ဆကျတိုကျ ထုတျလှငျ့ပွသ ခဲ့ပါတယျ။
China Central Television က အဲဒီ ထုတျလှ ငျ့မှုတှကေို တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ စတငျခဲ့ ပွီး အဲဒီထဲမှာ တရုတျထောကျ လှမျးရေး အာဏာပိုငျတှကေ ထိုငျဝမျရဲ့ ရာနဲ့ခြီတဲ့ သူလြှိုမှု တှကေို ဖျောထု တျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူလြှိုလို့ စှပျစှဲခံရသူေ တှထဲက တဈဦးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ ဩဂုတျလမှာ ဟောငျေ ကာငျက အစိုးရဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွပှဲတဈခုမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး ထိုငျဝမျဟာ ဆန်ဒပွသူတှနေဲ့ တဈသားတညျးရှိကွောငျး ဖျောပွထားတဲ့ လကျကမျးစာစော ငျတှကေို ဝခေဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီ အမြိုးသား ဟာ နောကျနမှေ့ာ အနီးမှာရှိတဲ့ တရုတျ ရဲ့ Shenzhen မွို့ကို သှားေ ရာကျခဲ့ပွီး အဲဒီမှာ စုဝေးရောကျရှိနတေဲ့ လကျနကျကိုငျ တရုတျ ရဲတှကေို ခိုးဝှကျပွီး ဗီဒီယိုရိုကျ ကူးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သူဟာ သတငျးအခကျြ အလကျတှကေို ထိုငျဝမျကို လှဲပွောငျးပေးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ထိုငျဝမျ သူလြှိုတှဟော “ခွိမျးခွောကျ လာနတေဲ့ တရုတျရဲ့ အန်တရာယျ” ဆိုတဲ့ အယူအ ဆတှကေို ဖွနျ့ခြိဖို့အတှကျ နိုငျငံရပျခွားမှာ အခွစေိုကျခဲ့ပွီး အယောငျဆောငျ ထားတဲ့ ပညာရပျပိုငျးဆို ငျရာ ကူးလူးဆကျဆံမှု အောကျမှာ တရုတျကနေ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးနတေယျလို့လညျး အဲဒီ ရုပျမွငျသံကွား အစီအစဉျတှမှော စှပျစှဲထားပါတယျ။
ထိုငျဝမျ အာဏာပိုငျတှကေ အဲဒီ စှပျစှဲခကျြတှကေို “ဆိုးရှားတဲ့ နိုငျငံရေး ကွိုးကိုငျခွယျလှယျမှု” လို့ ချေါဝျေါလိုကျပွီး တရုတျအနနေဲ့ ထိုငျဝမျကလူတှကေို အကဉျြးခဖြို့ ကွိုးစားနတောတှေ ရပျသငျ့တယျလို့လညျး ပွောလိုကျပါတယျ။
“ထိုင်ဝ မ် သူလျှိုတွေ ရဲ့ ဝန်ခံချက်များ” အစီအ စဉ်ကို တရုတ် ရုပ်မြင်သြံ ကားမှာ ထုတ် လွှင့် ( “ခြိမ်းခြောက် လာနေတဲ့ တရုတ် ရဲ့အန္တရာယ်” ဆိုပြီး ထိုင်ဝမ်က ကမ္ဘာကို ချတယ် တရုတ်က လည်း TV ကလွင့်ပြီး ထိုင်ဝမ် ကို အရှက်ခွဲတယ် ……ညှိတော့ ညှိနေကြပြီ….)
တရုတ်နို င်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနက ထိုင်ဝမ် အတွက် သူလျှိုလုပ်သူတွေရဲ့ ဝန်ခံချက်တွေ လို့ သူတို့က ပြောနေတာတွေ ပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ၃ ည ဆက်တိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသ ခဲ့ပါတယ်။
China Central Television က အဲဒီ ထုတ်လွှ င့်မှုတွေကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတင်ခဲ့ ပြီး အဲဒီထဲမှာ တရုတ်ထောက် လှမ်းရေး အာဏာပိုင်တွေက ထိုင်ဝမ်ရဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ သူလျှိုမှု တွေကို ဖော်ထု တ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူလျှိုလို့ စွပ်စွဲခံရသူေ တွထဲက တစ်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဩဂုတ်လမှာ ဟောင်ေ ကာင်က အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်ဟာ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရှိကြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ လက်ကမ်းစာစော င်တွေကို ဝေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ အမျိုးသား ဟာ နောက်နေ့မှာ အနီးမှာရှိတဲ့ တရုတ် ရဲ့ Shenzhen မြို့ကို သွားေ ရာက်ခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ စုဝေးရောက်ရှိနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် တရုတ် ရဲတွေကို ခိုးဝှက်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက် ကူးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ သတင်းအချက် အလက်တွေကို ထိုင်ဝမ်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်ဝမ် သူလျှိုတွေဟာ “ခြိမ်းခြောက် လာနေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ အန္တရာယ်” ဆိုတဲ့ အယူအ ဆတွေကို ဖြန့်ချိဖို့အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အခြေစိုက်ခဲ့ပြီး အယောင်ဆောင် ထားတဲ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆို င်ရာ ကူးလူးဆက်ဆံမှု အောက်မှာ တရုတ်ကနေ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းနေတယ်လို့လည်း အဲဒီ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေမှာ စွပ်စွဲထားပါတယ်။
ထိုင်ဝမ် အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီ စွပ်စွဲချက်တွေကို “ဆိုးရွားတဲ့ နိုင်ငံရေး ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှု” လို့ ခေါ်ဝေါ်လိုက်ပြီး တရုတ်အနေနဲ့ ထိုင်ဝမ်ကလူတွေကို အကျဉ်းချဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ ရပ်သင့်တယ်လို့လည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
Previous post တရုတျကွီး နဲ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာလား ဒူတာတေး….
Next post နှငျးဆီပါတီ ကို နိုငျငံရေးပါတီ အဖွဈဆကျလကျရပျတညျခှငျ့ကို ဖကျြသိမျးကွောငျး ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျကွငွော